Résonances de Cartier: အရောင်သစ်သည်သဟဇာတဖြစ်စေသည် HIGH ရတနာအိပ်မက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2017
ထူးခြားသောကျောက်မျက်များသည်အလင်းနှင့်တောက်ပ။ အရောင်များနှင့်တုန်ခါနေပြီးလတ်ဆတ်။ လှပသောဆွဲဆောင်အားရရှိသောခေတ်မီကျောက်မျက်များကိုမီးပေးသည်။ Bejeweled သည်အနာဂတ်ကိုကြည့်။ အတိတ်ကာလကိုပြန်ပြောင်းကြည့်။ အံ့ ers ဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်အမှုများဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းမှုအသစ်၏အနှစ်သာရဖြစ်သည် Résonances de Cartier.
အရောင်များ၏ပမာဏ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်အနက်၊ နက်ရှိုင်းသောကြည်ညိုလေးစားမှုမှထွက်ပေါ်လာသောဆွဲဆောင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်ကျောက်မျက်ရတနာများကိုပြောဆိုစေခဲ့သည်။ သူ့ဟာသူအဖိုးတန်နိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသောအဖိုးတန်ဘာသာစကားအတွက်စကားပြောဆိုမှု။
ထိုကျောက်မျက်များသည်ထူးခြားသောကျောက်တုံးများရိုက်နှက်သည့်အချိန်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည့်ရတနာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ တ်ဆင်သူ၏အတွင်းစည်းချက်နှင့်အထင်ကြီးလေးစားသောသူ၏အတွင်းစည်းချက်သည်
Résonances de Cartier မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်စိန်၏ရှုထောင့်များကရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးနီလာ၊ မြ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဂြိုဟ်တုတစ်ခု၏နက်ရှိုင်းသောအရောင်ကဲ့သို့ပုံရိပ်သဟဇာတဖြစ်မှု၊
Résonances de Cartier ဂရပ်ဖစ်များနှင့်တက်ကြွစွာလိုင်းများအားဖြင့်မြှင့်တင်ထားသောကျောက်မျက်ရတနာများကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာများကဲ့သို့သောစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်အတူမတူကွဲပြားစွာလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားနိုင်သည်။
Résonances de Cartier Maison ၏စတိုင်ကျသောအမွေအနှစ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမှတ်ရစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
XIX ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင် Cartier နှင့်အတူသူတို့၏အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်မည့် Neo-Classical စတိုင်၏ပထမဆုံးဖန်တီးမှုဖြင့်စတင်သောပုံပြင်။ Carto ထူးကဲသော Art Deco ၏တိကျခိုင်မာသည့်ဂျီသြမေတြီကိုပြန်လည်တီထွင်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်တွင်သူ့ဟာသူပရောဂျက်ပြုလုပ်သောပုံပြင်။
ဂန္ထဝင်ဆွဲဆောင်မှုလိုပဲ ဆှဲကွိုး umecume၎င်း၏အဖြူရောင်စိန်များ၊ ပုလဲကောင်းများနှင့်အဝါရောင်နှင့်ဖန်စီရှိသောအဝါရောင် briolette ဖြတ်စိန်များနှင့်အတူအရောင်တောက်တောက်ပနေသော။ ပင်လယ်မြှုပ်ကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းမှုဝေဟင်။
Résonances de Cartier Collier / Sautoir Écume
ပလက်တီနမ်၊ ၇၂.၂၄ ကာရက်၊ စုစုပေါင်း ၇၂.၂၄ ကာရက်၊ ဘဲဥပုံပုံစံစိန်များ၊ သဘာဝပုလဲများ၊ နှင်းဆီပန်းစိန်များ၊
ဒါမှမဟုတ်ထဲမှာလိုပဲ ဆှဲကွိုး သဟဇာတ, Cartier သရဖူ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတော်ဝင်အိမ်များနှင့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မိသားစုများဆွဲဆောင်ကြောင်းပန်းကုံးစတိုင်ပြန်ပြောပြသော “ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ဘုရင်များအတွက်လက်ဝတ်ရတနာများ”.
Résonances de Cartier Collier / Pendant Harmonie
ပလက်တီနမ် ၁၀ ဒသမ ၅၇ ကာရက်၊ စုစုပေါင်း ၂၁ ခု D / E / F IF / VVS1 / VVS2 / VS10.57 / VS1 သရက်ရွက် - စိန်ပွင့် ၁၀ လုံး၊ စုစုပေါင်း ၁၅ ဒသမ ၆၆ ကာရက်၊ , marquise-shaped စိန်, တောက်ပ - ဖြတ်စိန်။ အဆိုပါအပိုင်းအစကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Résonances de Cartier Collier Harmonie သည်၎င်း၏ဗဟိုဆွဲကြိုးမရှိဘဲနှင့်
Cartier သည်ပြောင်းလဲနိုင်သောရတနာအပေါ်သစ္စာရှိနေဆဲဖြစ်သည် ခြဲ့ကားပွော tiaraဘုရင်မကြီးသည်အမြင့်ဆုံးပုံစံဖြင့်ဘုရင်တစ်ပါးသရဖူဆောင်းနိုင်ပြီးတစ်ချိန်ကလည်ဆွဲအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၄၀.၂ ကာရက်ရှိသောအလွန်ကောင်းမွန်သောကိုလံဘီယာ cabochon-cut အလယ်ပိုင်းမြကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အိပ်မက်တစ်ခု။
Résonances de Cartier Tiara / လည်ဆွဲ Hyperbole
ကိုလံဘီယာမှရွှေဖြူ၊ ၁၄၀.၂၁ ကာရက်စတုရန်းပုံတူ cabochon-cut မြ၊ တောက်ပသောစိန်များ။
ဒါမှမဟုတ်ထဲမှာလိုပဲ စည်းချက် ဆှဲကွိုးအဘယ်ဗဟို element ကိုသန့်စင်ပြီး brooch အဖြစ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Résonances de Cartier လည်ဆွဲ / Brooch Rythmic
ပလက်တီနမ်၊ ၁၀.၀၈ ကာရက်ရှိ E VS10.08 စိန်ပွင့်တစ်လုံး၊ ၁.၃၃ ကာရက်ရှိဆhe္ဌဂံပုံသဏ္Dာန် D VS1 စိန်တစ်ပွင့် ၁.၀၄ ကာရက်ရှိ D VS1.33 စိန်တစ်လုံး၊ ၅၄.၄၃ ကာရက်ရှိစိန်ပုတီးလုံး၊
ခေတ်သစ်ဆွဲဆောင်မှုတင်းကျပ်သည့် Art Deco ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည် ကမ္ဘာပတ်လမ်း လက်စွပ်, ပတ္တမြား၏လိုင်းတစ်ဝက် - လခြမ်းအဖြစ်ခိုးဖြတ်စိန်နှစ် ဦး ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဘောင်ရှိရာ။
Résonances de Cartier Orbite လက်စွပ်
ရွှေဖြူ၊ ၅.၀၂ ကာရက် F VS5.02 နှင့် ၄.၇၂ ကာရက် F VS1 လဝက်ပုံသဏ္diamondာန်စိန်၊ အဆင့်မြင့်ပတ္တမြား၊ တောက်ပသောစိန်များ။
ဒါမှမဟုတ်ထဲမှာလိုပဲ ရှင်းလင်းသောရှင်းလင်းသည် လက်စွပ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များတွင်အလွန်တရာထူးခြားထင်ရှားသောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအနက်ရောင်ယွန်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဝိုင်းရံထားသည့်အဖြူရောင်စိန်အဖြူရောင်အရောင်နှင့်သစ်တော်သီးဖြတ်တောက်ထားသောအနက်ရောင်စိန်တလုံး၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပလက်တီနမ်၊ ၂.၇၃ ကာရက်ရှိ Fancy အနက်ရောင်သစ်တော်သီးပုံစိန်၊ ၂.၀၅ ကာရက်ရှိ E ၂ သစ်တော်သီးပုံစိန်၊ အနက်ရောင်ယွန်း၊ တောက်ပသောစိန်များ။
Art Deco စတိုင်သည် Cartier မှ 'အထင်ရှားဆုံးဖော်ပြချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်Tutti Frutti ' စတိုင်လ်။ ဒီက၏ monochromatic အနက်အတွက်သံလိုက်အကြံပြုသည် မြည်တမ်း ဆှဲကွိုးbriolette ကိုအရောင်တောက်။ ၎င်းသည် cabochon ဖြတ်တောက်မှု၏ပျော့ပျောင်းသောခါးဆစ်များ၌ပျော့ပျောင်းသွားသောရူဘယ်လ်လီတာတို့၏အောင်ပွဲသည်အနက်ရောင်ယွန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ တောက်ပသောစိန်များကပေါ်လွင်စေသည်။
Résonances de Cartier Collier ညည်းညူ
ရွှေဖြူ၊ ၄၀.၃၃ ကာရက်ရှိ briolette ဖြတ်ရူဘီတယ်၊ ရူဘယ်ရော်ဘာ၊ cabochon-cut rubellites၊ အနက်ရောင်ယွန်း၊ တောက်ပသောစိန်များ။
ဤအရာအားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားဆုံးသောလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကို Cartier's style ၏တိုင်များဖြစ်သောမှားယွင်းသောအမြင်အာရုံကုဒ်များအဖြစ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည် - စင်မြင့်၏အခန်းကဏ္ new အသစ်များရေးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုများကိုမြင်နိုင်သည့်စင်မြင့်တစ်ခု၏ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသောရှုခင်း၏ထောက်ခံမှု savoir-faire နှင့်အမွေအနှစ်၌တည်၏။
စုဆောင်းမှု၏ထူးခြားသောအပိုင်းပိုင်း Résonances de Cartier မြင့်မားသောရတနာအပိုင်းအစများမျှသာမဟုတ်ပါ၊
၎င်းတို့သည်အလင်းနှင့်၎င်း၏တောက်ပသောရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ စင်ကြယ်သောအရည်လိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်လွင်။ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
၄ င်းတို့သည်ဘဝအသစ်ကိုဖန်တီးပေးသော၊ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောသဟဇာတဖြစ်စေသောဂီတရေးစပ်သီကုံးမှုများကိုရတနာ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအတားအဆီးများကိုဖြိုခွဲသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများဖြစ်သည်။ CC
“ မှတ်ချက် ၁ ခုRésonances de Cartier: အရောင်သည်သဟဇာတဖြစ်မှုအသစ်နှင့်အတူတုန်ခါနေသည်"
Pingback: Résonances de Cartier: အရောင်သည်သဟဇာတဖြစ်မှုအသစ်ဖြင့်အရောင်တုန်ခါစေသည် - HIGH JEWELLERY DREAM - Ahmad Okbelbab, أحمدعقبالباب